Maitiro Ekusefa Kunze Referral Spam kubva kuGoogle Analytics
Referrer SPAM Chinyorwa: Maitiro Ekubvisa Referral Spam kubva kuGoogle Analytics Kuzivisa
Chipiri, Zvita 1, 2020 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Wati wambotarisa yako Google Analytics mishumo chete kuti uwane mamwe asinganzwisisike mareferenzi ari kubuda mumishumo? Iwe unoenda kune yavo saiti uye hapana kutaurwa nezvako asi kune toni yezvimwe zvinopihwa ipapo. Fembera chii? Ivo vanhu havana kumbobvira vareva traffic kune yako saiti.
Kana iwe usina kuziva sei Google Analytics yakashanda, zvakanyanya pixel inowedzerwa kune yega yega peji mutoro iyo inobata tani yedata uye inotumira kune injini yeGoogle yeAnalytics. Google Analytics inozojekesa iyo data uye inoironga zvakaringana mumishumo yauri kutarisa. Hapana mashiripiti ipapo!
Asi mamwe madhiri emakemikari emakemikari akagadzirisa nzira yeGoogle Analytics pixel uye ikozvino nyepera nzira uye rova ​​yako Google Analytics semuenzaniso. Ivo vanowana iyo UA kodhi kubva kune iyo script yawakapinza mune iyo peji uyezve, kubva kuseva yavo, ivo vanongorova GA maseva kakawanda uye kusvikira ivo vatanga kubuda pane ako ekutumira mishumo.
Izvo zvakashata zvechokwadi nekuti ivo havana kana kutombotanga kushanya kubva kune yako saiti! Mune mamwe mazwi, hapana nzira yeyako saiti yekuvadzivirira. Ndakaenda ndichitenderedza pamusoro peizvi nemuiti wedu uyo ​​akatsanangura nokushivirira zvavaiita nekudzokorora nekudzokorora kusvikira yapinda nedehenya rangu gobvu. Inonzi a kutumira chipoko or chipoko chinoreva sezvo ivo vasingatombobata yako saiti chero nguva.
Mukutendeseka kose, ini ndichiri ndisina chokwadi nei Google isina kungotanga kuchengeta dhatabhesi revanotumira spammers. Chakanakisa sei icho chingave cheplatform yavo. Sezvo pasina kushanya kunoitika chaizvo, aya spammers ari kukanganisa mhiko nemishumo yako. Kune mumwe wevatengi vedu referrer spam inoita pamusoro pe13% yeavo ese saiti kushanya kwavo!
Gadzira chidimbu muGoogle Analytics icho chinodzivirira Referrer Spammers
Saina kuakaundi yako yeGoogle Analytics.
Vhura iyo yekutarisa inosanganisira iyo mishumo yaunoda kushandisa.
Dzvanya iyo Rondedzero tebhu, uye vhura iyo mushumo yaunoda.
Pamusoro pechirevo chako, tinya + Wedzera Chikamu
Taura chikamu Yese Traffic (Hapana Spam)
Mumamiriro ako, ita shuwa kutaura kusanganisa ine sosi inowirirana regex.
Iko kune yakagadziridzwa runyorwa rwereferrer spammers paGithub iyo vashandisi vePiwik vari kushandisa uye yakanaka. Ndiri kudhonza iro rondedzero otomatiki pazasi uye kurimisa zvakanaka ne OR chirevo mushure meimwe domaini (unogona kuteedzera nekunamatira kubva kunzvimbo yemavara pazasi muGoogle Analytics):
Sevha chidimbu uye chinowanikwa kune zvese zvivakwa zviri muakaunti yako
Iwe uchaona matani emaseva zvinyorwa uye ma plugins kunze uko kuyedza uye kudzivirira kutumira spammers kubva kune yako saiti. Usazvinetse nekuzvishandisa… rangarira kuti uku kwaive kusiri kushanya chaiko kune yako saiti. Iwo akanyorwa vanhu ava vari kushandisa akanyepera iyo GA pixel yakananga kubva kuseva yavo uye haina kana kutombouya kune yako!
Tags: Analyticsblock referrer spamgoogle analyticsreferrer spamreferrer spam runyorwa
Freshcaller: Virtual Runhare Sisitimu ye Remote Kutengesa Matimu
Wemusango Apurikoti: Iyo Yese-In-Imwe Inobhadharwa Nhengo Yepuratifomu